အရေပြားမှာ ဖြစ်တဲ့ ကြွက်နို့ ............... - Hello Sayarwon
အရေပြားမှာ ဖြစ်တဲ့ ကြွက်နို့
ကြွက်နို့ ဆိုတာက လူအတော်များများမှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ အရေပြား ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ကလေးတွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေ၊ လူကြီးတွေ အားလုံးမှာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကြွက်နို့ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘာကြောင့် ကြွက်နို့ဖြစ်ရတာလဲ။ ကြွက်နို့ကို ကာကွယ်လို့ရမလားဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ကြွက်နို့ဆိုတာ ဘာလဲ …….
ကြွက်နို့ဆိုတာက အရေပြားဆဲလ်တွေဟာ human papillomavirus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှုကြောင့် ပုံမှန် မဟုတ်ဘဲ လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာမှုကြောင့် ခံစားရတဲ့ အရေပြား ပြဿနာ တစ်မျိုးပါ။
လိင်အင်္ဂါမှာ ဖြစ်တဲ့ ကြွက်နို့တွေရှိသလို အရေပြားပေါ်မှာ အထူးသဖြင့် ခြေလက်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကြွက်နို့တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကြွက်နို့တွေက များသောအားဖြင့် လက်ချောင်းလေးတွေ၊ လက်တွေမှာ ပေါက်တာများပါတယ်။
ကြွက်နို့က အရေပြားပေါ်မှာ ခပ်သေးသေး အသားဖုလေးပါ။ ထိခိုက်ရင် ခပ်မာမာရှိပြီး အချို့သော ကြွက်နို့တွေမှာ အနက်ရောင် အစက်သေးသေးလေးတွေတောင် ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ကြွက်နို့လေးတွေက သေးငယ်ပေမယ့် ဆံချည်မျှင် သွေးကြောလေးတွေကို သွေးခဲစေနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်နို့ ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက များသောအားဖြင့် ကိုင်တွယ်ထိတွေ့မိတာကနေတဆင့် ကူးစက်ကြပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ထိတွေ့မိပြီး ၂ လ ကနေ ၆ လအတွင်းမှာ ကြွက်နို့ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အချို့သော ကြွက်နို့တွေက အန္တရာယ် မရှိသလို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုခုကို ရောက်တဲ့အခါ သူ့အလိုလို ပျောက်သွား တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ ကြွက်နို့ကြောင့် အရှက်ရတာ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက် ခံစားရတာတွေကြောင့် ကြွက်နို့ကို သူ့အလိုလို ပျောက်ဖို့ထက် ဖယ်ရှားဖို့ပဲ ရွေးချယ် တတ်ကြပါတယ်။
ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ရှိလဲ ……
ပုံမှန်အားဖြင့် ကြွက်နို့တွေဟာ လက်တွေ လက်ချောင်းတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မြင်သာတဲ့ လက္ခဏာတွေ အနေနဲ့
သေးငယ်ပြီး အသား ဖုလေးတွေပါ။
အရောင်က အရေပြား အရောင်နဲ့ မတူဘဲ ဖြူနေတာ၊ ပန်းရောင်၊ အနီရောင်ဖြစ်နေတာ၊ အသား နေလောင်ထားသလို အရောင်မျိုး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ထိလိုက်ရင် အသားဖုက ပျော့မနေဘဲ မာနေနိုင်ပါတယ်။
အသားဖု သေးသေးလေးမှာ သွေး​ကြောလေးတွေ ပိတ်ဆို့တာကြောင့် ဖုလေးထဲမှာ အမဲစက်လေးတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အခြေအနေမှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသမလဲ …..
ကြွက်နို့တွေက များသောအားဖြင့် ထိခိုက်စေတာမျိုး မရှိပေမယ့် အခုလို အခြေအနေဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုပါမယ်။
ကြွက်နို့က ကြီးလာမယ်။ နာမယ်။ အရောင်ပြောင်းမယ်။
ကြွက်နို့က အချိန် အတော်ကြာတဲ့အထိ မပျောက်ဘဲ ရှိနေမယ်။ ပွားမယ်။ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်မယ်။
ကြွက်နို့လား၊ အခြား အရေပြားပြဿနာလားဆိုတာ မသဲကွဲဘဲ ဖြစ်မယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်။ ကြွက်နို့တွေ အများကြီး ထွက်နေမယ် ဆိုရင် ကိုယ်ခံအားမှာ ချို့ယွင်းချက် တစ်ခုခု ရှိနေတာ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသကြည့်ဖို့ လိုပါမယ်။
ဘာကြောင့် ကြွက်နို့ ဖြစ်ရတာလဲ …..
ကြွက်နို့ ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ human papillomavirus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတာကြောင့်ပါ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အမျိုးအစား ၁၅၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်မှာ ကြွက်နို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားကတော့ သိပ်အများကြီး မရှိပါဘူး။
များသောအားဖြင့် HPV ဗိုင်းရပ်စ်တွေက လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့်ပဲ ကူးစက်တာ များပါတယ်။ ကူးစက်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ အရေပြားချင်း ထိတွေ့မိတာ၊ အသုံးအဆောင်တွေ မျှဝေ သုံးစွဲမိတာတွေကနေ တဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အရေပြားကို ကုတ်ခြစ် ပွန်းပဲ့မိတာကြောင့် အရေပြား ပေါက်ပြဲမှုကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ခံအားက HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကို တုံ့ပြန်ပုံ မတူကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် HPV ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ထိတွေ့မိတိုင်းလည်း ကြွက်နို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဘယ်သူတွေက ဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံးလဲ ……
အခုလိုသူတွေမှာ ကြွက်နို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကို တုံ့ပြန်ဖို့အတွက် ကိုယ်ခံအား ပြည့်ပြည့်ဝဝ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့
ကိုယ်အင်္ဂါ အစားထိုး ကုသမှု ခံယူထားသူတွေ
HIV ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူတွေ
AIDS ရောဂါ ခံစားနေရသူတွေမှာ ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ …..
ကြွက်နို့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် အခုလိုလေးတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါမယ်။
ကြွက်နို့တွေနဲ့ မထိတွေ့မိအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်မှာ ပေါက်နေတဲ့ ကြွက်နို့ကိုတောင် ခဏခဏ မထိပါနဲ့။
ကြွက်နို့တွေကို မဆိတ်ဆွပါနဲ့။ ဆိတ်ဆွတာက ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်လို့ပါ။
ကြွက်နို့ကို လက်သည်းညှပ်နဲ့ ညှပ်တာ၊ ကျောက်တုံးနဲ့ စားဖြစ်တာတွေ၊ ဖဲ့တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
လက်သည်းတွေ မကိုက်ပါနဲ့။ လက်သည်းကိုက်တာက အရေပြားကို ထိခိုက်မိပြီး ပိုးဝင်လွယ်တာကြောင့်ပါ။
ကြွက်နို့တွေကို မထိခိုက်မိစေဖို့ သေချာလေး ဂရုစိုက်ပါ။
Common warts https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-warts/symptoms-causes/syc-20371125#:~:text=Common%20warts%20can%20grow%20on,on%20your%20fingers%20or%20hands. Accessed Date 25 October 2021
How to get rid of warts https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/how-to-get-rid-of-warts Accessed Date 25 October 2021
ှSeborrheic Keratosis (လူကြီးကြွက်နို့)